စက်တင်ဘာထာဝရ: အောက်တိုဘာ ၂၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆန္ဒပြ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်.
အောက်တိုဘာ ၂၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆန္ဒပြ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်.
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်အနီးတွင် နံနက် ၁၂ နာရီ ခွဲဝန်းကျင်အချိန်တွင် အမျိုးသမီ၊အမျိုးသား ၂၀၀န်းကျင်ခန့်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ထိုထဲမှ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင်သူ အမျိုးသမီး ၂ဦးအား မယက ရုံးမှ ဖမ်းဆီးခေါ်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရသူ အမျိုးသမီး၂ ဦးမှာ မခင်မျိုးလွင်နှင့်မသီတာတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 3:23 AM